खेलाडीहरुलाई प्रधानमन्‍त्रीको यति ठुलो ‘सरप्राइज’ हेर्नुस कसले कति नगत पाए त ? – Hamrosandesh.com
खेलाडीहरुलाई प्रधानमन्‍त्रीको यति ठुलो ‘सरप्राइज’ हेर्नुस कसले कति नगत पाए त ?
काठमाडौं, २६ मङ्सिर ।
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) प्रतिगोगितामा विजयी खेलाडीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘सरप्राइज’ रकमको घोषणा गरेका छन्। बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बधाई दिन बोलाएका प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष पुरस्कारको घोषणा गरेका हुन्।
ओलीले साग प्रतियोगितामा दुईभन्दा बढी स्वर्ण जित्ने खेलाडीलाई जनही ११ लाख, एउटा मात्र स्वर्ण जित्नेलाई ९ लाख, रजत विजेता खेलाडीलाई ६ लाख र कास्य जित्ने खेलाडीलाई तीन लाख रुपैयाँ सरकारको तर्फबाट दिने घोषणा गरेका हुन्।
अघिल्लो सागमा भने सरकारले स्वर्ण विजेतालाई पाँच लाख, रजतलाई तीन र कास्यलाई दुई लाख दिएको थियो। समूहमा स्वर्ण जित्ने खेलाडीले भने जनही पाँच लाख पाउने छन् । सँगै प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक प्रशिक्षकलाई पाँच लाखका दरले पुरस्कृत गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
नेपालको आयोजनामा भएको साग प्रतियोगिता मंगलबार समापन भएको हो। मंगलबार साँझ दशरथ रंगशालामा आयोजित विशेष समारोहबीच १३औँ साग समापन भयो।
समापन समारोहमा भिडियो सन्देश पठाएका प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमै बोलाएर विजेता खेलाडीलाई बधाईसँगै विशेष रकमको घोषणा गरेका हुन्। नेपालले ५१ स्वर्ण पदक जित्दै प्रतियोगिता सम्पन्न भएको हो। नेपालले कुल पदक भने २०६ वटा जितेको छ।
सागमा भारतले १७४ वटा स्वर्ण पदक जित्यो। त्यसैगरी श्रीलंका ४०, पाकिस्तान ३१, बंगलादेश १९, माल्दिभ्स १ स्वर्ण जित्न सफल भए भने भुटानले एउटा पनि स्वर्ण जित्न सकेन्।
एउटा मात्र स्वर्ण जित्ने सम्भावनासहित पुरुष फुटबलको फाइनलमा नेपालसँग भिडेको भुटान उपविजेतामा सीमित भयो। नेपालले फुटबलमासमेत स्वर्ण जितेर आफ्नै भूमिमा इतिहास रचेको छ।